विद्यार्थीहरूको लागि एडोब क्रिएटिव क्लाउड - विशेष छुट - कुपनहरू
विद्यार्थीहरूको लागि एडोब क्रिएटिव क्लाउड - विशेष छुट
एडोब उद्योगमा सिर्जनाकर्ताहरूको लागि सबभन्दा ठूलो डिजाईनि produc र उत्पादकत्व उपकरणहरू मध्ये एक हो। तिनीहरूले तपाइँको रचनात्मकता मुक्त गर्न मद्दत गर्दछ। विभिन्न क्षेत्रका धेरै जसो विद्यार्थीहरूले यो सेवा प्रयोग गर्छन्। अब तपाइँ एडोब क्रिएटिव्ह क्लाउड विद्यार्थी छुटको साथ प्रीमियम लाभहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यस गाईडमा, हामी तपाईंलाई यो सेवाबाट कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भनेर देखाउनेछौं।
के Adobe सँग विद्यार्थी छूट छ?
Adobe छात्र छूट जो पैसा मा बचत को आशा गरीरहेको छ को लागी एक अनिवार्य हो। प्रयोगकर्ताहरूले कम मूल्य प्राप्त गर्न सक्दछन् जब उनीहरू शिक्षा खातामा साइन अप गर्छन्। विद्यार्थीहरूले उनीहरूको खरीदहरूको माध्यमबाट %०% बचत गर्न सक्दछन्। यो शिक्षकहरूको लागि पनि उपलब्ध छ।तपाईं यस खरीद मार्फत २०+ अनुप्रयोगहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। उच्च लागत प्रति महिना १। ..। छ।
अन्य विद्यार्थीहरूले तपाइँलाई मनपर्दछ प्रस्ताव गर्दछ:
Xfinity छात्र छूट
माईक्रोसफ्ट अफिस छात्र छूट
छूटको साथ एडोब क्रिएटिव क्लाउड प्राप्त गर्नका लागि चरणहरू:
एक छात्र छुट पाउने प्रक्रिया एकदम सरल छ। प्रयोगकर्ताहरूले छिटो विद्यार्थी खाताको लागि साईन अप गर्न सक्दछन्। हामी तपाईंलाई मद्दतको लागि चरणहरू छलफल गर्नेछौं। तिनीहरूलाई पछ्याउनुहोस्, र तपाईं चाँडै सेवाहरू प्रयोग गर्न सुरू गर्न सक्नुहुनेछ।
साइन अप गर्न प्रयोगकर्ताहरूले एडोब रचनात्मक क्लाउड वेबसाइटको भ्रमण गर्नुपर्नेछ। तपाईं निम्न हेर्न सक्नुहुन्छ लिंक ।यसले तपाइँलाई विद्यार्थी छुट पृष्ठमा लग्नेछ। यहाँ तपाईं आकर्षक सम्झौता पाउन सक्नुहुन्छ। सुरू गर्नका लागि अब खरीद गर्नुहोस् बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटमा खाता सिर्जना गर्नुपर्नेछ। पहिलो चरण तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।विद्यार्थीहरूले उनीहरूको .edu ईमेल ID प्रविष्ट गर्न सक्दछन्। प्रक्रिया सुचारु ढ goes्गले चलेको सुनिश्चित गर्न हामी यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछौं। प्रयोगकर्ताहरूले अन्य ईमेल खाताहरू पनि प्रयोग गर्न सक्दछन्। वेबसाइटमा कुनै बाध्यता छैन।
तपाइँ तपाइँको वेबसाइट मा भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ चाँडै तपाइँको सदस्यता सुरू गर्न। प्लेटफर्मले तपाईंलाई क्रेडिट कार्डहरू र Paypal मार्फत भुक्तान गर्न सक्षम गर्दछ। यो पनि तपाइँको क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। स्थानीय भुक्तानी विकल्पहरूको लागि पनि समर्थन छ।
अन्तिम चरण भनेको तपाईंको विद्यार्थी स्थिति प्रमाणित गर्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको स्कूल वा कलेज आईडी साझेदारी गर्न सक्दछन्।प्रक्रिया तपाइँको लागि पूर्ण सुरक्षित छ। योग्य प्रत्येकले यस प्रक्रिया मार्फत साइन अप गर्न सक्दछ। प्रमाणिकरण चरणहरू तुलनात्मक रूपमा सीधा छन्। त्यहाँ चाँडै प्रमाणिकरण हुनसक्दछ यस दिन स्वत: उपलब्ध साथ।
आश्चर्यजनक! अब तपाईं चाँडै सस्तो लागतमा प्रीमियम सुविधाहरूको आनन्द लिन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
एडोब क्रिएटिव क्लाउडका सुविधाहरू:
एडोब विद्यार्थी छुट तपाईं लाई केही प्रीमियम सुविधाहरु ल्याउँछ। यो जो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको लागि अनुप्रयोगहरू आवश्यक पर्दछ। सबमिशनहरू कलेज र स्कूलहरूमा एक मानक आवश्यकता हो। यहाँ Adobe विद्यार्थी योजना खरीद को लाभ हो।
१. सबै Adobe अनुप्रयोगहरू पहुँच गर्नुहोस्
Adobe ले तपाईंलाई तिनीहरूको सबै अनुप्रयोगहरूको लागि एक प्रीमियम सदस्यता प्रदान गर्दछ। यसमा फोटो, भिडियो, सामाजिक मिडिया निर्माण उपकरणबाट सबै समावेश छ। प्रयोगकर्ताहरूले पनि Adobe Acrobat उपकरणमा पहुँच प्राप्त गर्दछ। पीडीएफ रिडर कागजात सिर्जना र सम्पादनका लागि उत्तम छ। फोटोशप, प्रीमियर प्रो, स्पार्क एआर, र अधिक धेरैको मजा लिनुहोस्।
२ हेर्नुहोस् र सिक्नुहोस्
प्रयोगकर्ताहरूले यस घडीको मजा लिन र प्रक्रियाहरू सिक्न सक्दछन्। यो आफ्ना सीपहरू सुधार गर्न चाहने विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम छ। Adobe ले तपाईंलाई उनीहरूको सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सिक्न सक्ने निश्चित गर्न क्षमता प्रदान गर्दछ। टेक्नोलोजी निरन्तर विकसित भइरहेको छ। तपाईको औंलाहरूमा हुनु उत्तम हुन्छ।
Free. नि: शुल्क टेम्पलेट र एडोब स्टक
एडोबले प्रयोगकर्ताहरूलाई टेम्पलेटहरू मार्फत आफ्ना सीपहरू प्रयोग गर्न पनि विकल्प दिन्छ। यो तपाइँ तपाइँको डिजाइन र सामग्री सुधार गर्न को लागी एक बूस्ट दिन्छ। हरेक दिन लुभावनी दृश्यहरू सिर्जना गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। यसले विद्यार्थीहरूका लागि प्रक्रियालाई हल्का तुल्याउँछ। एडोब स्टक सेवा पनि एक स्वागतयुक्त थप हो।
यी शानदार सुविधाहरू हुन् जुन एडोब क्रिएटिव क्लाउड विद्यार्थी योजनाहरूको साथ आउँदछन्।
यस गाईडमा हामी तपाईंलाई आवश्यक पर्ने सबै चरणहरू र सुविधाहरू उल्लेख गर्दछौं। हामी आशा गर्दछौं कि यसले सुनिश्चित बनाउँछ तपाईंले ठोस निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंको उपकरणहरूमा आश्चर्यजनक दृश्यहरू सिर्जना गर्न सुरू गर्नुहोस्।
२१ एयरपड्स प्रो सुझावहरू र युक्तिहरू तपाईंले थाहा पाउनुपर्दछ
केबल टिभीको लागि उत्तम विकल्पहरू के हुन्
फिल्महरू डाउनलोड बिना नै नि: शुल्क अनलाइन हेर्न
यूट्यूब कन्भर्टर mp3 नि: शुल्क डाउनलोडर
कसरी नि: शुल्क नेटफ्लिक्स २०१ get प्राप्त गर्ने
विन्डोज १० बाट टिभीमा कास्ट गर्नुहोस्
फिल्महरू टिभी कार्यक्रमहरू अनलाइन नि: शुल्क हेर्नुहोस्